Kutsva kutsva kwakawanikwa muUbuntu | Linux Vakapindwa muropa
Kutsva kutsva kwakawanikwa muUbuntu
Kukanganisa kutsva kwekuchengetedzwa kwakawanikwa muUbuntu masisitimu, panguva ino zvine chekuita neLinux Kernel yavanoshandisa uye nevanorwisa vanogona kuramba sevhisi uye voba ruzivo rwakakomberedzwa
Mazuva mashoma apfuura, isu takange taburitsa nhau nhau umo maiti izvo suye kushaya simba kwainge kwaonekwa en Ubuntu anoshanda masystem, nekuti mazuva ano kumwe kukundikana kwekuchengetedzwa kwakarongwa senzira yakakomba kwaonekwa.
Iko kukanganisa kwekuchengetedza panguva ino kunetsekana muLinux Kernel yedzinotevera shanduro dzeUbuntu: Ubuntu 14.04 LTS Trusty Tahr uye Ubuntu 15.04 Vivid Velvet. Paive nemabugs chaiwo maviri mushanduro yega yega uye akawanikwa nevashandisi.Neraki, ivo vakatogadziridzwa, zvichiita kuti zvidikanwe kugadzirisa
Mune vhezheni 14.04, madhiragi akawanikwa mazuva mashoma apfuura uye aive anotevera.
Mushandisi Benjamin Randazzo akawana kuti mushandisi wemuno inogona kuwedzera ropafadzo uye kuba ruzivo rwakavanzika kuburikidza nekernel nekuda kwekutadza mune yakawanda-system mutongi.
Marc-André Lureau awana kuti iyo Linux Kernel yeiyi vhezheni Ini ndakanga ndisina kuchengetera kana kudzikisira nzvimbo iyo inogona kutora iyo faira uko kunyoreswa kunochengetwa, ipapo sisitimu sevhisi inogona kurambwa neDoS kurwisa pane iyi faira.
Mune vhezheni 15.04, ivo vakawanikwa maawa mashoma apfuura, Ivo vakafanana chaizvo neaya anopiwa neshanduro 14.04 uye vakawanikwa nevashandisi vamwe chete.
Benjamin Randazzo akaona a ruzivo runodonha mu kernel Nekuda kwekutadza kweLinux kernel multisystem driver, nekuda kweizvi mushandisi anogona kuba ruzivo rwepachivande.
Marc-André Lureau akawana izvozvo kukundikana kumwe chete izvo zvaakawana mune vhezheni 14.04 LTS yakagadzirwawo pano, ndiko kuti, hapana nzvimbo yakachengeterwa iyo faira regiyo, saka kuramba basa kunogona kuitwa.
Chokwadi izvi zvinokanganisa kukanganisa zvese shanduro dzeUbuntu, kunyangwe vari Ubuntu, Lubuntu, Edubuntu, Xubuntu ... uye isu tinofanirwa kugadzirisa nekukurumidza kuchengetedza kukuru.
Kuti tiite izvi, isu tinosvika kune yekuraira koni uye tinyore wekare wekuraira sudo apt-tora-kugadzirisa uye sudo apt-tora kusimudziraNenzira iyi tinenge takachengeteka kubva kune vanotirwisa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Kutsva kutsva kwakawanikwa muUbuntu
Iyi bhaggi inongokanganisa dunhu reUbuntu here? kana zvese zvakaita se (Fedora, Debian, OpenSuse, RedHat, nezvimwe ...)
Amir Torres (@amirorres) akadaro
apt-tora kusimudzira ndeyekuvandudza maapplication uye iyo system (pasina kuchinja kugovera), apt-tora dist-kusimudzira ndeyekuvandudza (shandura) iyo distro, kana iwe uine 14.04, kana uchishandisa dist-kusimudzira ichagadzirisa kusvika 14.10, kana iwe unoda kumutsidzira kusvika 15.04 unofanirwa kushandisa dist-kusimudzira muna 14.04 uye muna 14.10.
Pindura kuna Amir Torres (@amirtorrez)
Technical glitch haha, ndinoichinja izvozvi.
Izvo hazvisi chaizvo izvo zvaunotaura. Iyo apt-tora dist-kusimudzira kuraira chete inovandudza iyo kernel. Semuenzaniso, kana isu tiine Linux Kernel 3.16.50, 3.16.51 ichagadziridzwa. Kana iyo distro vhezheni paUbuntu 14.04 mushure memutemo wakataurwa icharamba iri Ubuntu 14.04. Ini handishandise otomatiki kugadzirisa, asi ini ndinogara ndichigadzirisa kubva kune iyo terminal (Sudo apt-tora yekuvandudza & sudo apt-tora kusimudzira & sudo apt-tora dist-kusimudzira).
Ubuntu chete, asi mune ese akasiyana ayo (Ubuntu Mate, Xubuntu ...)
Mario Perez akadaro
Ini ndiri mutsva pane izvi, asi iwo murairo unouya kumagumo hausi wekuvandudza kugovera, semuenzaniso kubva pa14.04 kusvika 15.04, ko kana ini ndichida kudzivirirwa asi ini handidi kumutsiridza vhezheni yacho?
Pindura kuna Mario Pérez
Kana iri sudo apt-tora kukwidziridzwa uye ne-dist-kusimudzira iko kurodha vhezheni yekugovera.
Jesu Carpio akadaro
Mwari wako aripi iye zvino ... ndanga ndiri mushandisi weLinux kwemakore gumi nemashanu uye nguva zhinji ndinozvirumbidza nekuve ne "Safe" system. Hakuna OS yakachengeteka, ndinofunga windows haina kuchengeteka nekuti inokwezva kune vanoba kutsvaga kushomeka kwayo, sezvo vanhu vazhinji vachiishandisa, ikozvino sezvo linux yatora kusvetuka kwakakosha, isu tinotanga kuwana mabugs akawedzera uye akakomba.
Pindura kuna Jesu Carpio
Zvino asi ngatiregei kuenzanisa, mutsauko ndewekuti zvikanganiso zveLinux zvinogadziriswa uye Windows yakavanzwa haha.
Mwari wangu ari kudenga.
Ini ndakabhowekana nekugara windows nekuda kweakawanda bhuruu screen, kukanganisa mushure mekukanganisa :(
Zvinyorwa zvisina kukwana zvinokonzeresa izvo zvakamboshanda "kutadza
Mari uye mari yekutenga antivirus uye marezinesi ekuita mabasa angu nekushanda.
Iye zvino GNU / Linux ndiyo iripo uye yatora kutaridzika kweavo vasingatendi avo vaisatenda mazviri, saka ikozvino vanodya mazwi avo anovava uye kudada kwavo kuishandisa, kuteedzera, kugadzira dunhu rayo (hahahahaha) kuenderera kurarama uye kwete kuramba uri munguva yakapfuura.
Hapana chakakwana, asi zvishoma nezvishoma tiri kurasa izvo zvinhu izvo zvisingatishandire uye zvasara kumashure.
Kwazisai vese Linuxeros kubva pamoyo !!!!!
Uye makorokoto kune vakagadzira ino blog.
Nenzira, ndinovimba munogona kundibatsira. Ndanga ndichiita zvidzoreso kubvira nezuro asi dambudziko rakamuka neiyo kernel yekuvandudza. Kana ndichigadzirisa zvinondikanda zvinotevera:
iemex @ iemex-AM1MHP: ~ $ sudo apt-tora kusimudzira
0 yakagadziridzwa, 0 ichaiswa, 0 kubvisa, uye 0 haina kuvandudzwa.
6 haina kuiswa zvizere kana kubviswa.
0B yekuwedzera dhisiki nzvimbo inozoshandiswa mushure mekushanda uku.
unoda kuenderera here? [Y / n] hongu
Kugadzira linux-mufananidzo-yakawedzera-3.16.0-50-generic (3.16.0-50.66 ~ 14.04.1) ...
kumhanya-zvikamu: kuuraya /etc/kernel/postinst.d/apt-auto-removal 3.16.0-50-generic /boot/vmlinuz-3.16.0-50-generic
kumhanya-zvikamu: kurwisa /etc/kernel/postinst.d/dkms 3.16.0-50-generic /boot/vmlinuz-3.16.0-50-generic
kumhanya-zvikamu: kuuraya /etc/kernel/postinst.d/initramfs-tools 3.16.0-50-generic /boot/vmlinuz-3.16.0-50-generic
gadziridzo-initramfs: Kugadzira / boot / initrd.img-3.16.0-50-generic
gzip: stdout: Hapana nzvimbo yakasara pane mudziyo
E: mkinitramfs kutadza cpio 141 gzip 1
gadziriso-initramfs: yakundikana ye /boot/initrd.img-3.16.0-50-generic ine 1.
run-zvikamu: /etc/kernel/postinst.d/initramfs-tools akabuda nekodhi yekudzoka 1
dpkg: kukanganisa kugadzirisa package linux-image-extra-3.16.0-50-generic (-configure):
tambo yakaisa post-yekumisikidza script yakadzosa kukanganisa kubuda kodhi 1
dpkg: zvinoenderana nenyaya zvinodzivirira linux-mufananidzo-generic-lts-utopic kumisikidzwa:
linux-mufananidzo-generic-lts-utopic zvinoenderana ne linux-mufananidzo-yakawedzera-3.16.0-50-generic; Zvisinei:
Iyo package 'linux-image-yakawedzera-3.16.0-50-generic' haina kugadzirirwa parizvino.
dpkg: kukanganisa kugadzirisa package linux-image-generic-lts-utopic (-configure):
nyaya dzekutsamira - dzakasiiwa dzisina kugadziriswa
dpkg: zvinoenderana nenyaya zvinodzivirira linux-generic-lts-utopic kumisikidzwa:
linux-generic-lts-utopic inoenderana ne linux-mufananidzo-generic-lts-utopic (= 3.16.0.50.41); Zvisinei:
Iyo `linux-mufananidzo-generic-lts-utopic 'package haina kugadziridzwa parizvino.
dpkg: kukanganisa kugadzirisa linux-generic-lts-utopic (-configure) package:
dpkg: Nyaya dzekuvimbika dzinodzivirira kumisikidza linux-yakasainwa-mufananidzo-3.16.0-50-generic:
linux-yakasainwa-mufananidzo-3.16.0-50-generic zvinoenderana ne linux-image-yakawedzera-3.16.0-50-generic (= 3.16.0-50.66 ~ 14.04.1); Nekudaro, mushumo we "apport" hauna kunyorwa nekuti meseji yekukanganisa inoratidza kuti meseji yekukanganisa inosangana nekutadza kwakapfuura
Chirevo che "apport" hachina kunyorwa nekuti meseji yekukanganisa inoratidza kuti meseji yekukanganisa inosangana nekutadza kwakapfuura.
Hapana "apport" chirevo chakanyorwa nekuti kukosha kwe "MaxReports" kwatozadziswa
dpkg: kukanganisa kugadzirisa pasuru linux-yakasainwa-mufananidzo-3.16.0-50-generic (-configure):
dpkg: Nyaya dzekuvimbika dzinodzivirira kumisikidza linux-yakasainwa-mufananidzo-generic-lts-utopic:
linux-yakasainwa-mufananidzo-generic-lts-utopic zvinoenderana ne linux-yakasainwa-mufananidzo-3.16.0-50-generic; Zvisinei:
Iyo package 'linux-yakasainwa-mufananidzo-3.16.0-50-generic' haisati yagadziriswa izvozvi.
dpkg: kukanganisa kugadzirisa package linux-yakasainwa-mufananidzo-generic-lts-utopic (-configure):
dpkg: Nyaya dzekuvimbika dzinodzivirira kumisikidza linux-yakasainwa-generic-lts-utopic:
linux-yakasainwa-generic-lts-utopic inoenderana ne linux-yakasainwa-mufananidzo-generic-lts-utopic (= 3.16.0.50.41); Zvisinei:
Iyo package 'linux-yakasainwa-mufananidzo-generic-lts-utopic' haina kugadziridzwa parizvino.
dpkg: kukanganisa kugadzirisa package linux-yakasainwa-generic-lts-utopic (-configure):
Zvikanganiso zvakasangana nazvo mukugadzirisa:
E: Sub-process / usr / bin / dpkg yakadzosa kodhi yekukanganisa (1)
iemex @ iemex-AM1MHP: ~ $
Yangu Ubuntu ndeye 14.04.2 LTS AMD64. Ichokwadi ndechekuti ini handizive zvekuita, handizive kana ichigona kugadziriswa mune inotevera Kernel gadziriso yakatumirwa neCanonical kana chii. Kana mumwe munhu akandipa zano ini ndinozvikoshesa nekuti ini handina nguva yakawanda kushandisa GNU / Linux system.
Ini handisi nyanzvi yeUbuntu asi unoita kunge wapererwa nenzvimbo pa / bhuti partition, panogarwa kernel (iyo vmlinuz faira). Tarisa uone kana uine tsanga dzinoverengeka mune dhairekitori (iwe unozosiyanisa nenhamba yeshanduro) uye, mune yemushandi pamwe chete, ndakaigadzirisa nekubvisa yekare, pamwe neinitrd neimwe mafaera anoenderana neiyo kuverenga (sekureba sekuona kwako kuti inodzokororwa).
Kune rimwe divi, ini handizive kana paizove nechero chishandiso muUbuntu kubvisa tsaru tsanga nenzira yakachengeteka.
Muchokwadi ihwohwo hutsva hwakaiswa Ubuntu (vhiki imwe) uye ini ndangova neyakafanana kernel yekuvandudza. Ini ndinobvisa tsanga dzekare kuburikidza neUbuntu Tweak. Nekudaro ini handina kubvisa tsaru tsaru kubva pane zvandino taura. Saka kusahadzika kwangu. Mune mamwe makomputa ndanga ndiine tsanga dzinosvika ina uye hadzina kumboitika kwandiri.
Hi Javier, ndine dambudziko rakafanana uye handikwanise kuzvigadzirisa, watozvigadzirisa here? Ndatenda
Pindura kuna christiams
Zvakanaka, sekutaura kwakaita dhouard, hapana nzvimbo mu / bhutsu, asi ndinofunga imhaka yekuti mukombuta yandakamisa ndakagadzira EFI boot chikamu, pamwe inyaya yako nekuti inosiya diki nzvimbo sekurudzirwa (hapasisina kupfuura 40 kb). Solution: ingobvisa iyo yekare kernel. Ini ndaishandisa Ubuntu Tweak uye panguva iyo iri kubvisa kernel yekare iyo inoisa chinhu icho chaisakwanisa kuisa uye nyaya yacho yakagadziriswa.
Chii chinonzi Linux meta-mapakeji?
WhatsApp yeUbuntu Kubata ichafanirwa kumirira